Xavi Hernandez Oo Sheegay In Ku Dhawaaqistii Real Madrid Ee Tababare Julen Lopetegui Ay Ahayd Waqti Aan Ku Haboonayn-Muxuu Ka Yidhi Xaalada Xulka Qarankiisa Spain? – Laacib.net
Xavi Hernandez Oo Sheegay In Ku Dhawaaqistii Real Madrid Ee Tababare Julen Lopetegui Ay Ahayd Waqti Aan Ku Haboonayn-Muxuu Ka Yidhi Xaalada Xulka Qarankiisa Spain?
Halyayga xulka qaranka Spain iyo kooxda Barcelona ee Xavi Hernandez ayaa ka hadlay dareenkiisa ku aadan xaalada xun ee uu galay xulka qarankiisa Spain maalin ka hor furitaanka koobka aduunka ee Russia. Xavi ayaa waraysi uu siyay Radio Marca waxa uu ku muujiyay in ayna waqti ku haboon ahayn in Real Madrid ay shaqada tababaranimo u magacowday Julen Lopetegui oo isla markiiba shaqada xulka qaranka Spain laga caydhiyay.
Xavi Hernandez ayaa kalsooni buuxda ka muujiyay in ciyaartoyda xulka qarankiisa Spain ee Sergio Ramos, Gerard Pique iyo Andres Iniesta ay leeyihiin hogaamin isla markaana ayna xaalada tababare badal ee La Roja ayna saamayn doonin wax qabadkooda koobka aduunka.
Xavi Hernandez oo markii hore u muuqday mid iska diidaya in uu ka hadlo magacaabistii Real Madrid ee Julen Lopetegui ayaa haddana muujiyay sida ayna waqti ama fursad fiican u ahayn in Julen Lopetegui loo magacaabay shaqada Madrid maadaama oo xili xaasaasi ah uu ku jiray xulka qarankiisa oo koobka aduunka qayb ka ahi.
Dhinaca kale Xavi ayaa taageero buuxda siiyay madax waynaha xidhiidhka kubbada cagta Spain ee Luis Rubiales wuxuuna ku dooday in si fiican uu wax qabtay isla markaana uu xidhiidhka kubbada cagtu yahay waxa ka horeeyay wax walba oo kale.
Xavi Hernandez oo wax laga waydiiyay ku dhawaaqistii Real Madrid ee in Julen Lopetegui uu macalinka cusub ee kooxdeeda yahay ayaa ku jawaabay: ” Anigu ma ihi qofka tan ka hadlaya isaga ayaa sameeyay. Waxaa la eedeeyay hanaanka ku dhawaaqista. May ahayn waqtigii ugu haboonaa ama waqti fursad ah”.
Xavi Hernandez oo ka hadlaya go’aanadii uu qaatay madax waynaha xidhiidhka kubbada cagta Spain ee Luis Rubiales ayaa yidhi: ” Wax fiican ayuu sameeyay isla markaana xidhiidhka kubbada cagta ayaa wax walba oo kale ka horeeya”.
Ugu danbayn Xavi ayaa ka hadlay aragtiisa in isbadalka tababare ee xulka qarankiisa Spain ay koobka aduunka saamayn kaga yeelan doonto wuuxuna yidhi: “Waligaa ma ogid, haddaba ciyaartoydu dhamaan way soo arkeen waana hubaal, door fiican ayay ka ciyaari karaan koobka aduunka, hogaaminta lama waayi doono, waxaa jooga Ramos, Pigue, Iniesta…., waxaa jooga dad aad u diyaarsan iyo jawi aad u fiican”.
“Ma aha xaaladii ugu fiicnayd laakiin isla mar ahaantaa waxay iyaga midaynaysaa in ka badan waxayna naftooda ka bixin doonaan in ka badan, waligaa ma ogid”